कोस्ट्रोमा मा शानदार पूर्व टावर
सान्टा क्लाउस उत्तरी आफ्नो जाडो कर्तव्य प्रदर्शन पछि रहेको छ, जबकि, आफ्नो नातिनी पनि आफैलाई कब्जा गर्न पर्छ केहि। यो सूर्य धेरै संवेदनशील छ किनभने, त्यो यो सुन्दर र सहज वर्ष भर हुनेछ जसमा एक घर चाहिएको छ। यो र एक सुन्दर हवेली, हामी धेरै रोचक लेख सिक्न हुनेछ जो बारेमा बनाए।
बरफ पूर्व को छवि प्राचीन हामीलाई आए। यसलाई धार्मिक समारोह मा एक भूमिका खेल्छ, सम्बन्धित थियो मृत्यु, देवी Moran नाम रात र जाडो अन्यजातिका।
प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाहरु पनि यस्तो मनसाय भएकोले यसको चिन्ह बाँकी। को 19 औं शताब्दीमा हामीलाई हिउँ बाहिर जन्म भएको थियो जो एक केटी को पोर्ट्रेट ल्याए। यो दल शब्दकोश को पृष्ठ, साथै लोकगीत Afanasiev मा सामाग्री को एक कलेक्टर मा उल्लेख गरिएको छ।
यो छवि मा स्थित छ सुविधाहरू छलफल सौन्दर्य, कोमलता र समुद्र को समर्पण छ। आखिर, त्यो आफ्नो जीवन बलिदान र प्रेमको नाममा सूर्य मा पगाल्न तयार छ।
त्यसपछि यो छवि अक्सर छोराछोरीको उत्सव, र विशेष गरी नयाँ वर्षको फर-रूखहरू मा प्रदर्शन मा निस्क्यो छ। तर, क्रांति, धर्म विरुद्ध संघर्ष पछि, 1929 मा, एक क्रिसमस छुट्टी हुन, र यो संग भएनन् जब केटी व्यवस्था बाहिर थियो। त्यहाँ हिम पूर्व प्रेम लुकाउन प्राण को भुमरीमा टाढा थियो, अब पुरानो चाडहरूमा थियो।
निस्सन्देह, पर्व घर मा गोप्य राखिन्छ। विशेष गरी, यो नयाँ वर्ष द्वारा स्थापित भएको थियो जब, हिउँ केटी उत्सव वर्ण बीच स्थानको गर्व गर्न सक्षम थियो। 1937 सान्टा क्लाउस को छवि नजिक आफ्नो नातिनी प्रयोग गर्दा तथ्यलाई पहिलो कि, द्वारा चिन्ह लगाइएको थियो। तब देखि, तिनीहरूले नयाँ वर्ष समयमा सँगसँगै थिए र धेरै वर्ष को लागि आनन्द संग मान्छे को मन भर्नुहोस्।
तपाईं रूसी शहर (अर्थ मा पाउनुहुनेछ कोस्ट्रोमा) पूर्व। Terem नदी वोल्गा मा एक सानो राज्य जस्तै उनको। यसलाई विस्तृत ढाँचाहरू संग सजाया, लग को बनाइएको थियो। जादू ठण्डा हिउँदमा shrouded टावर पूर्व। आफ्नो Mistress - एक सुन्दर केटी, सान्ता क्लाउस को नातिनी। त्यो सधैं वयस्क र साना छोराछोरी दुवैको लागि आफ्नो विहारको हेर्न खुसी हुन्छ। अतिथिहरूको सधैं ठूलो Boon तिनीहरूले स्थानीय वा विदेशीहरू हुन कि हुन मानिन्छ।
शानदार प्राणीहरू को सुन्दर हँसिलो कम्पनी त्यहाँ छ। सँगै तिनीहरूलाई, त्यो सान्टा क्लाउस को अर्को यात्रा गर्न सबै Cooks। हिम पूर्व एक recluse छैन हुनत। त्यो Pereslavl-Zalewski आफ्नो घर जायज कि Kikimora Vyatka, Berendey दौरा।
शरद ऋतु मा नारी प्रतीक्षा जो उनको प्रसिद्ध हजुरबुबा सम्मानको व्यवस्था Karelia मा Olonets खेल। तर, त्यो कहिल्यै आफ्नो आफ्नै घरमा क्रम बारेमा बिर्सनुहुन्न र यो आकर्षक र अतिथिहरूको लागि सहज बनाउन सबै अवस्थाको सिर्जना गर्नुहोस्।
आफ्नो समय मा एक बरफ प्रथम Ostrovsky को टुक्रा को स्थान कोस्ट्रोमा थियो। कन्या टावर यसको संयोगले यहाँ स्थापित। त्यहाँ पनि पनि सान्टा क्लाउस को नातिनी बारेमा तस्वीर रूपमा निमित्त जो 1968 मा खिच्नुभयो थियो।
निर्माण अनुकरण Berendeevka गाउँमा। को सुटिङ समाप्त गर्दा, दृश्यहरु शहर हस्तान्तरण गरिएको थियो। पार्क खोल्ने, यो पूर्व टावर काम गर्न थाले। हामी4अप्रिल मा जसको जन्मदिन सालाना 2009 देखि मातृभूमि बालिका को एक कार्यक्रम विकास गरे। सान्टा क्लाउस को यसरी नातिनी र यी ठाउँमा दर्ता गरेका छन्।
बासिन्दाहरू र रोचक विवरणहरू
सधैं चमत्कार, त्यहाँ हुन जहाँ पूर्व टावर। यहाँ तपाईँले पूरा गर्न सक्छन् र घरहरू, र कोटा Bayunov। नायक दयालु अभिवादन, र धनी घर भन्दा सबै मजा देखाउँछ। तपाईं मनोरंजक खेल प्ले हुनेछ देखि, तपाईं सकारात्मक छाप धेरै प्राप्त गर्न आनंद से छक्क हुनेछ। पनि सबैभन्दा गम्भीर व्यक्ति, यद्यपि एक समय को लागि, तर हृदय मा एक सानो बच्चा हुनेछ।
बिताएको समय आराम र रमाइलो गर्न चाहने सबैलाई आफ्नो पर्खालहरु टावर पूर्व (कोस्ट्रोमा) निम्तो दिनुहुन्छ। पर्यटकहरू समीक्षा पहिलो कदम देखि envelops कि अद्भुत वातावरण बारे भन्नुहोस्। यहाँ शासन विचित्रताहरू। एक परी कथा मा एक यात्रा मा खर्च एक घण्टा, तपाईं लामो समय को लागि तिनीहरूले आफ्नो प्राण खुवाउन भनेर धेरै भावना टिप्न छौँ। तपाईं एक ठूलो समूह, र एक जोडी वा परिवार रूपमा आउन सक्नुहुन्छ।
हरेक दिन, बरफ पूर्व टावर पर्खने 10:00 देखि 18:00 गेष्ट स्वीकार्नुहुन्छ। पछिल्लो भ्रमण मा 17:00 मा बुक गर्न सकिन्छ। साँझ - समयमा बिदाको बिहान र लेट को पहिले घण्टा कब्जा संग काम गर्ने दिन वृद्धि हुन सक्छ।
तपाईं संस्थाले भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ जब टावर सान्टा क्लाउस मा प्राप्त गर्न समय लायक पूर्व-किताब आरक्षण। यो स्कूल बिदा र बिदाको समयमा, सप्ताहन्तमा मा धेरै लोकप्रिय छ। कारण ठूलो माग गर्न टिकट राम्रो छिटो उड लागि।
कोस्ट्रोमा मा शानदार पूर्व टावर पदयात्रा, तपाईं, योजना गर्न सक्छ ई-मेल वा फोन गरेर प्रशासन सम्पर्क गर्नुहोस्। ठाउँ विषयगत भएकोले, डिसेम्बर र जनवरी उच्चतम workload र व्यस्त काम संग महिना हो।
यसलाई अग्रिम बुक गर्न आवश्यक छ। उत्कृष्ट टावर पूर्व 220 rubles को लागि कुनै पनि वयस्क भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। बच्चा पासेसहरू लागि 150 rubles लागत। धेरै बच्चाहरु यस्तै कथा मा आफूलाई पाउन सपना। त्यहाँ जो तपाईं 300 rubles ल्याउँछ एक बरफ कोठा, छ, र आफ्नो बच्चा -। 150।
आरक्षण को अग्रिम सिर्जना गरिएको छ भने, त्यसपछि बैंक मार्फत भुक्तानी एक रसिद, प्रयोग, सम्भव प्रथम धरहरालाई मा प्राप्त।
के मनोरञ्जन कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ
को पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री तपाईंले व्यक्तिगत तवरमा पूरा हुनेछ र आफ्नो सबै कोठा पकड। तपाईंको नजर कठपुतली शो Svetlitsa को क्षेत्र मा स्थान लिन्छ कि प्रस्ताव गर्नेछ। Gornitsa रोचक किनभने यहाँ केटी यो घरमा के उनको जीवन बताउनुहोस्। तपाईं पुरातन मिथक बस्ने, पूर्व वर्ग र रोचक कुराहरू तपाईं रहस्य र दन्त्यकथा, spells कास्ट गर्न अलिकति खोल्न प्रयोग गर्न सक्छन् शुरू गरिनेछ। छोराछोरी शहर बस्ने भएको शिल्प हेर्न मौका पनि छ।
विशेष गरी लोकप्रिय बरफ कोठा, गर्मी जाडो को शासन को माहौल मा तपाईं परिवहन सक्षम छ। तापमान माइनस 15 डिग्री मा राखिएको छ। यहाँ सधैंभरि, ठण्डा समय शासनकालमै यो पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री लागि त सुविधाजनक छ। यहाँ सबै शुद्ध बरफ बनेको छ। यो पर्खाल र बर्तन, मूर्तिहरु र आभूषण। यो सबै महानताका यूराल कारीगरों द्वारा बनाइयो। अतिथिहरूको यहाँ, ताकि, तातो मिठो ककटेल पिउन दिनेछु चिसो भए तापनि त्यहाँ हेरविचार र सान्त्वना शासनकालमै।
न्यानो जूता र तंग लुगा ल्याउन। सुन्दर सत्कार घर बाहेक, तपाईं यार्ड मा खेल पर्खिरहेका छन्। तपाईं जहाँ एक महान समय छ गर्न सक्छन् पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री र घरहरू संग सक्रिय सँगै आराम। सडक मा हिम पूर्व मा मजा। सबैतिर बाट हास्य आए, र गाला मा शरमाना जल। सञ्चालन बदमास नृत्य invigorating संगीत। यस्तै अवस्थामा नरमाइलो गर्न धेरै गाह्रो।
रोचक तथ्य को XXI सताब्दी को खेलौना बारेमा: एक स्पिनर के हो
किशोरका लागि एक सामयिक मुद्दा: एक भावनाहरु कसरी बन्न
किशोर संस्कृति र यसको सुविधाहरू
मिलान नाम: मूल र अर्थ
Syuzen eman optimist - ग्रह पृथ्वी मा fattest महिला!
कसरी घास वा कुचो देखि आफ्नै हातले मेला एक effigy बनाउने?
बीमा योगफल र बीमा मूल्य
कफी र मिठाई, फ्रान्सेली फ्राइज र "तातो कुकुर" - यो सबै सँगै ईर्ष्या गराउँछ
अभिनेत्री ओल्गा Antonova: जीवनी र व्यक्तिगत जीवन
अनिश्चितकालीन अभिन्न। अनिश्चितकालीन अभिन्नहरूको गणना
Asynchronous एकल-चरण मोटर एकाइ र यसको जडान
ग्यास पानी तताउने खरीद द्वारा के निर्देशित?
वी सेट: संरचना
कसरी मितिमा केटी मनोरन्जन गर्नु गर्न
कसरी जोरजियन मा sacivi खाना पकाउनु?
सूर्य कसरी राम्रो तन र सही यसलाई के कसरी